အစားအစာ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးနှငျ့ GAP/HACCP - Spectrum SDKN
အစားအစာ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးနှငျ့ GAP/HACCP
အစားအစာနှငျ့ တိရစ်ဆာနျအစာ ကဏ်ဍနညျးဗြူဟာမြားနှငျ့ ခွုံငုံသုံးသပျခကျြမြား
အစားအစာနှငျ့ တိရစ်ဆာနျအစာ ကဏ်ဍ နညျးဗြူဟာမြားနှငျ့ ခွုံငုံသုံးသပျခကျြမြား
ရောင်စဉ်လှိုင်း- စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသိပညာကွန်ယက်- ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တစ် အပြောင်းအလဲအစဦးကာလဖြစ်သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြောင်းလဲမှုအဆင့်သစ်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုစသည့် ကဏ္ဍများတွင် လွယ်ကူချောမွေ့ရန်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ရှိသူ များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ရောင်စဉ်လှိုင်းက ခံယူထားသည်။
ရောင်စဉ်လှိုင်းက အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဒေသတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပညာပေးရေး အစီအစဉ်ကို သတင်းအချက်အလက်မျှဝေသည့်ကွန်ယက်အနေနှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
သတင်းအချက်အလက်အမှန်ရရှိစေရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံယူမှုတိုးတက်လာစေရေးကို အထောက်အပံ့ပြုရန်မှာ ကျွန်ပ်တို့၏ အဓိကတာဝန်အဖြစ် စူးစိုက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားများအနေနှင့် မိမိတို့တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်လားရာကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင် တိကျမှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်တွင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန်မှာ ကျွန်ပ်တို့အဖွဲ့၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများကိုမြှင့်တင်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ သုတေသနပြုချက်များကို ဝေမျှပေးခြင်းနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်များ ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ရောင်စဉ်လှိုင်းအဖွဲ့က ပြုလုပ်ပေးသည်။
Spectrum has an enormous library of electronic documents that will progressively be uploaded to the website during 2014. They will be fully searchable, but if you can't find something that you think we might have, but have not uploaded yet, please get in touch.
If you have materials that you think should be in our resource repository, please let us know or send it to us. We also look forward to hearing how the material people download has been useful. Please use our contact form to provide your feedback and suggestions and sign up for updates if you would like regular news about new uploads to the Library.
ရောင်စဉ်လှိုင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များကို website တွင် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်အဖြစ်ထားရှိသည်။ သင့်အနေနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်မှ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း သင်လိုချင်သည့် စာအုပ်စာတမ်းများကို မတွေ့ရှိပါက ကျွန်ပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ထံတွင် ဝေမျှသင့်သည်ဟု ယူဆသည့် အချက်အလက်အရင်းအမြစ်များရှိနေပါက ကျွန်ပ်တို့ကို အသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက် အချက်အလက်ကူးယူမှုက မည်သို့ အသုံးဝင်သည်ကို ကျွန်ပ်တို့သိလိုသည် ။ သင်တို့၏ တုန့်ပြန်မှုများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ပ်တို့ Website တွင် သင်တို့၏ အချက်အလက်များကို Sing up ပြုလုပ်ပြီး ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည့်အပြင် သတင်းအသစ်များနှင့် စာအုပ်အသစ်များ website တွင် တင်လျှင်တင်ခြင်း သိရှိအောင် စီစဉ်ထားနိုင်သည်။